shurushuru's Training BodyBlog posts at Bodybuilding.com
: Feb 18, 2010, 9:19AM
Ndiri kufara zvachose.Kuvhura kwandaita blog rino kunoratidza kuti ndiri kumira mira!!Hanzi nemumwe muimbi ane mukurumbira "chekumirira hapana".Nekuti ukamira unodya izvozvo. Muna Nyamavhuvhu gore rapera cc(2009)iro zvinhu zvanga zvamira maranga miro nerongo.Dumbu rangu raita kunge businessman wepagrowth point.Ndanga ndisakwanise kukotama kanaÂ kunhonga chinhu pasi.Ndaingofemereka kunge imbwa yabva kumhanyisa tsuro.Potse potse blambi yangaÂ isi kusaonekwa. Ukaona shamwari,hama nevana vako vakukuudza kuti wakuita kunge humpty dumty zvinhu zvinenge zvapressa semukadzi akapfeka body suit.Mamiriro akaita zvinhu aitoda action chopazi.Ndakatanga kumhanya munharaunda yandinogara.Zvairwadza heavy!!!musana uyu kubanda kunge warohwa negogo!!.Ndakamhanya for one month,waive mutambo everyday,nguva yekumhanya yasvika ndaisuruvara zvikuru,asi ndakashingirira kwemwedzi wose. One day ndakapinda mugym bvandaseta direct debit.Zvimwe zvinhu zvinoda kushinga kunge blambi inopinda mugambi makasviba kuti ndo.Musi wandakainda mugym vanhu vose vaitraya kuita nice asi ndaiona mupfungwa dzavo kuti vaitofunga asi baba ava vanenhumbu? Hezvo ndavepano mimwedzi matanhatu kubva musi wandakatanga kutyora muviri.Handisati ndaita mufananidzo wekubaira kumadziro( pin up).Asi chidumbu chave kupera infact hapachina ndave kunanaira kuzvikugubhu zvitanhatu(six pack.).Mhasuru dzavepowo,mugym vanhu vanotondibiggerwo!! Blog ino inoratidza kuti ndasvika kwamvura yacheka makumbo.handichadi kuve munhu akarembuka.Iwe ukaona ndakuita nhungo ,ndinongedzere kuimba yemasimbi. Saka nyaya iripo apa ndichazvikwanisa zvandatanga izvi?? Muchikamu chinotevera ndinenge ndichi ripota ndiri mukati megym
: Feb 18, 2010, 8:45AM